Sedex qof oo lala xiriirinayo weerarkii saldhiga booliska Mombasa oo xabsiga ku sii jiri doona – The Voice of Northeastern Kenya
Sedex qof oo lala xiriirinayo weerarkii saldhiga booliska Mombasa oo xabsiga ku sii jiri doona
Waxaa maanta oo talaada ahayd maxkamada la soo taagay sedex dumar ah oo lagu eedeynayo in ay wax ka ogaayen weerarkii ay 3 dumar ah maalintii axadda ahayd ee lasoo dhaafay ku qaadeen saldhiga booliska ee bartamaha Mombasa.
Eedeysanayaashan oo lagu kala magacaabo Naima Mohammed, Saida Ali iyo Shukri Ali ayaa lagu soo qab qabtay howlgalo baaxad leh oo ay fuliyeen ciidamada booliska ee ka howlgala Countigaasi.
Sedexdan qof ee la xiray oo maxkamada la soo taagay ayaa ka jawaabin dacwadaha lagu eedeynayo maadama ay ku adkeeysten in ay hadlaan mise luuqadooda la fahmo.
Xafiiska dacwad oogaha ayaa sheegay in la keeni doono qof turjumaad ah oo aqoon u leh luuqada ay ku hadlaayan eedeysanayaashaasi oo ah luuqada soomaliga ah iyo qof yaqaano hadalka dadka aan wax maqalin maadama mid kamid ah sedexdaas qof ay tahay dhagool.
Xaakinka maxkamadda ay kasoo hormuqdeen Emmanuel Mutunga ayaa amar ku bixiyay in dadkaasi lagu sii hayo gacanta laamaha amaanka ilaa arbacada ee maalinta berito ah.
Dadkan la xiray oo dhammaantood ah dad qaxooti ah oo kasoo jeeda Soomaalia ayaa la rumeysanyahay in ay la noolaayeen 3-da dumarka ah ee weerarka ku qaaday saldhiga, kuwaas oo ay booliska toogasho ku dileen.
Dumarkaasi ayaa galinkii hore ee maalintii axada ahayd waxa ay isku dayeen in ay weerar ku ekeeyaan saldhiga booliska Mombasa, iyagoo halkaas ku dhaawacay 2 askari oo ku sugnaa saldhigaasi.
Laamaha ammaanka ayaa hadda sii laban laabay baaritaannada ku aadan dhacdadaasi oo ay billaabeen dabayaaqadii isbuuci lasoo dhaafay.
Waxaa soo kordheysa cabsi laga qabo in kooxaha loogu yeero argagixisada ay iminka dhaqdhaqaaqyadooda u adeegsanayaan dumar, taasoo aan badanaa horay looga baranin.
← Gavanaha Maamul goboledka Garissa oo maanta markale kasoo hormuqday Maxkamada
Hogaamiyayaasha iyo shacabka ku dhaqan Countiyada Isiolo iyo Garissa oo baaq nabaded loo diray →